Andriamanitra mahatoky sy feno indrafo
"Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy." Isaia 55:7
Andininy avy ao amin'ny Baiboly
"Ary nisy boka nanatona Azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: Raha mety Ianao, dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: Mety Aho; madiova ianao." (Marka 1:40-41)
"Amin'ny famindrampo mandrakizay ... no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao." (Isaia 54:8)
"Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra Azy." (Salamo 103:13)
"Iantrao aho araka ny haben'ny famindramponao." (Nehemia 13:22)
"Ianao, Jehovah ô, aza miaro ny antranao tsy ho amiko; aoka ny famindramponao sy ny fahamarinanao hiaro ahy mandrakariva." (Salamo 40:11)
"Ny famindrampon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao." (Fitomanian'i Jeremia 3:22-23)
"Na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao." (Isaia 54:10)
"Miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo." (Jakoba 5:11)
Fiantrana feno tambitamby, hery amin'ny andron'ny fitsapana,
Fahasoavana sy famelan-keloka, faharetana mandefitra, fiadanana mamy
No miboiboika avy ao amin'ny fonao feno fitiavana,
Toy ny ony tsy mety ho lany sy tsy ho ritra mandrakizay.